China 5052 Aluminum Circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Product Description: Ny kodiarana alim-bary 1050 novokarin'i Shuanglin Jiate dia napetaka tamin'ny alàlan'ny CCNCXmm sy 0.25mm, ny hateviny dia ny 6mm ka hatramin'ny 50mm, ny laharana 1200, 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, Tempo H5052 , H14, H24 an'ny H16, O, sns. Aluminium 18 aluminio dia ampiasaina amin'ny dingan'ny fitohanana, spinning, sns., Dia afaka mamokatra vokatra toy ny fitaovana keky, fitaovana elektrika, lakolosy fanjelanjelatra LED. Inona ny endriky ny ala 1060 amin'ny alim-borona? Aoka ho afaka amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-danja, scratches, tain-koditra, fanodinana okida, fanotanam-bidy, korontana, marika fingotra, loto amam-borona ary fahalemena hafa izay hanelingelina azy ...
Famaritana ny tadin-damba aluminio Ny kodiaran-kiraro alim-bary vita amin'ny alim-bovona 1050 dia manana endrika tsara tarehy amin'ny sary manjopiaka, mitsambikina. Mampiasa ny 99.5% ny kitay vita amin'ny alimo isika mba hamokarana ny faribolan'ny alimo mba hahazoana ny kalitaon'ny alim-pandihantsika. Tianay ny manome ny mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny faran'ny kalitao tsara indrindra sy ny fanompoana tsara indrindra. Manana traikefa isika amin'ny famokarana kodiarana alimina mandritra ny folo taona mahery miaraka amin'ny karazan'entana 200-300Tons isam-bolana. Ny tsena lehibe ho an'ny Aluminium Circle no Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana, Afrikana sy Atsimo. Ny faribolan'ny alim-bary dia tena mandray anay ary mahafeno fepetra ho an'ny ...
Quick Detail: 1. Alloy: 1100, 1050, 1060, 1070, 3003 2. Temper: O, H12, H14 3. Fahatelo: 0.3mm ~ 10mm 4. Ampidiro: 20mm - 1300mm 5. Karazana: Lisitra, Lisitra boribory, Circle, Disc 6. Ny baiko minitra: 500kgs isaky ny 7. Ny fandoavam-bola TT na Irrevocable LC eo imasom-bahoaka Description: Aluminium wafers dia ampiasaina matetika amin'ny electronics, fanaovan-tsakafo isan'andro, fanafody, kolontsaina sy fanabeazana, fiara mandeha amin'ny ordinatera, fitaovana elektrika, fanalefahana, famokarana machinery, fiara, fiaramanidina, indostria miaramila, baolina, fanorenana, fanontana ary indostria hafa. Ny fitaovana entin-javatra toy ny titanium, fitaovana fanenomana, sns ... ary ny fitaovana an-tsokosoko toy ny fantson-drano, ny fitaovana fantson-drano, sns. Io no iray amin'ireo plastika aluminium lehibe indrindra ...